Hlola i-England - World Tourism Portal
Yini ukubona. Izindawo ezihamba phambili eziphezulu eNgilandi
Ukudla kwendabuko okujwayelekile kwesiNgisi
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha eNgilandi
Bukela ividiyo ngeNgilandi
Hlola i-England, izwe eliyingxenye ye-United Kingdom. Izwe lihlanganisa isihlanu sesi-8 sesiqhingi saseGreat Britain, esiseNyakatho ye-Atlantic, futhi sihlanganisa iziqhingi ezincane ezingaphezu kwe-100, njengeziqhingi zaseScilly nase-Isle of Wight.
Indawo yaseNgilandi ingamagquma namathafa aphansi, ikakhulukazi enkabeni naseningizimu ye-England.
Iholwa yimifula emikhulu nemifudlana emincane, iNgilandi ingumhlaba ovundile futhi ukuphana kwenhlabathi yayo kuye kwasekela umnotho wezolimo ochumayo weminyaka eyizinkulungwane. Ekuqaleni kwekhulu le-19th, iNgilandi yaba yingqophamlando yoHlelo Lwezimboni Lomhlaba wonke maduze futhi kwaba yizwe elithuthuke kakhulu emhlabeni. Ukudweba izinsiza ezivela kuwo wonke amazwekazi asezinzile, amadolobha anjengeManchester, iBirmingham, neLiverpool aguqula izinto zokusetshenziswa zaba yimikhiqizo eyenziwe ngemakethe yomhlaba, ngenkathi London, inhlokodolobha yezwe, yaqhamuka njengenye yamadolobha amqoka emhlabeni kanye nesizinda senethiwekhi yezombusazwe, yezomnotho, namasiko enwetshelwa kude kakhulu nemigwaqo yaseNgilandi. Namuhla indawo enkulu yedolobha laseLondon ihlanganisa ingxenye enkulu eningizimu-ntshonalanga yeNgilandi futhi iyaqhubeka nokusebenza njengesikhungo sezimali saseYurophu futhi isikhungo sokuqamba izinto ezintsha-ikakhulu emasikweni athandwayo.
Isimo sanamuhla saseNgilandi siguqulwe kakhulu ngabantu kangangokuba akukho hlane langempela elisele. Kuphela yi-moorland ekude kakhulu nezintaba ezingakaze zithintwe. Ngisho nama-Pennine moors asesibhakabhaka asenyakatho agcwele izindonga zamatshe ezomile, futhi imifino yawo iguqulwa ngokutshalwa kwezimvu zezintaba. Izimpawu zamakhulu eminyaka zokuxhashazwa nokusetshenziswa zilawula umhlaba wesimanje.
Okubaluleke kakhulu ukwakheka kwamadolobhana nemizana, okwasungulwa ngezikhathi zamaRoma-Brithani nama-Anglo-Saxon futhi kuye kwaqhubeka njengendlela eyisisekelo. AmaNgisi ahlala emaqenjini amakhulu asakazeke kakhulu, kungaba semizana noma emadolobheni, noma emadolobheni anamuhla. Yize lokhu okwedlule kube yindawo yokuhlangana ngesikhathi se19th nasekuqaleni kwekhulu le-20th ngaphandle kokuhlela ngokucophelela, uhulumeni ubeke umkhawulo ekubandakanyekeni kokuthuthukiswa kwamadolobha, kanti iNgilandi igcina amathrekhi obanzi wokulima emaphandleni phakathi kwamadolobhana, amadolobhana amancane ahlala nawo egcwele ukuhlaza kwezihlahla , amakhophi, uthango, nezinkundla.
Inhlokodolobha iyona London, enendawo enkulu yedolobha worldtourismportal.com/london-englandi-United Kingdom kanye ne-European Union. Inani labantu baseNgilandi abangaphezulu kwezigidi ezingama-55 lakhiwa ama-84% wabantu base-United Kingdom, ikakhulu abazungeze iLondon.
Ubufakazi bokuqala bokuthi umuntu ukhona endaweni manje esaziwa njengeNgilandi U-Homo u-antecessor, ethandana cishe iminyaka eyi-780,000 edlule. Amathambo amadala kakhulu we-proto-human atholakala eNgilandi kusukela ku-500,000 eminyakeni edlule.
Ngesikhathi seNguquko Yezimboni, izisebenzi eziningi zasuka emaphandleni aseNgilandi zaya ezindaweni ezintsha futhi zandza izindawo zezimboni zasemadolobheni ukuzosebenza kumafektri, ngokwesibonelo Birmingham futhi Manchester, okubizwa nge- “Workshop of the World” ne “Warehouse City” ngokulandelana.
I-England inesimo sezulu esishisayo sasemanzini: imnene ngamazinga okushisa angaphansi kwe-0 ° C ebusika futhi angabi ngaphezu kwe-32 ° C ehlobo. Isimo sezulu simanzi kaningi futhi siyashintsha. Izinyanga ezibandayo kakhulu nguJanuwari nangoFebhuwari, eyokugcina ikakhulukazi ogwini lwesiNgisi, kuyilapho uJulayi evamile inyanga efudumele kakhulu. Izinyanga ezinesimo sezulu esifudumele ngoMeyi, Juni, Septhemba no-Okthoba. Imvula isatshalaliswa ngokulingana unyaka wonke.
Izikhumbuzo eziningi zamatshe zakudala zamiswa ngesikhathi se-prehistoric; phakathi kwaziwa kakhulu Stonehenge, UDeveli Arrows, uRudston Monolith noCastlerigg.
Ngokwethulwa kwezakhiwo zakudala zaseRoma kwakukhona ukuthuthukiswa kwamabhasikidi, amabhavu, izinkundla zemidlalo yaseshashalazini, imincintiswano yokunqoba, izizaha, amathempeli amaRoma, imigwaqo yamaRoma, izinqola zaseRoma, amasheya nemifantu.
KwakungamaRoma asungula amadolobha okuqala namadolobha anjengeLondon, Bath, I-York, uChester noSt Albans. Mhlawumbe isibonelo esaziwa kakhulu ngudonga lukaHadrian olunwebeka ngasenyakatho neNgilandi. Esinye isibonelo esilondolozwe kahle amaRoma Bath Bath, Somerset.
Kuyo yonke inkathi yePlantagenet, kwakhiwa isakhiwo sesiNgisi samaGothic, sinezibonelo eziphambili kufaka phakathi amasonto ama-medieval anjengeCanterbury Cathedral, iWestminster Abbey kanye neYork Minster. Ukunwebeka esisekelweni samaNorman bekukhona nezinqaba, izigodlo, izindlu ezinkulu, amanyuvesi namasonto esonto.
I-17 ye-25 United Kingdom I-UNESCO World Heritage Sites iwela eNgilandi.
Ezinye zezaziwa kakhulu yilezi: Udonga lukaHadrian, Stonehenge, Izindawo ze-Avebury nama-Associated, UMbhoshongo waseLondon, I-Jurassic Coast, nabanye abahlukahlukene.
Kuneminyuziyamu eminingi eNgilandi, kodwa mhlawumbe okuphawuleka kakhulu yiBritish Museum yaseLondon. Ukuqoqwa kwayo kwezinto ezingaphezu kwezigidi eziyisikhombisa kungenye yezinto ezinkulu kunazo zonke futhi ezibanzi kakhulu emhlabeni, ezithathwe kuwo wonke amazwekazi, kuboniswe futhi kubhalwe phansi umlando wesiko lomuntu kusukela ekuqaleni kwalo kuze kube manje. ILabhulali yaseBrithani eLondon yiyona umtapo wolwazi kazwelonke futhi ungomunye wemtapo wolwazi omkhulu wokucwaninga emhlabeni, ophethe izinto eziyizigidi ezingama-150 ngazo zonke izilimi nezinhlobo ezaziwayo; kufaka nezincwadi ezizungeze izigidi ze-25. Igalari yezobuciko ephakeme kunayo yonke igalari kaZwelonke eseTrafalgar Square, enezindawo zokuqoqa imidwebo ezingaphezu kuka-2,300 kusukela maphakathi no-13th century to 1900.
Imipheme yeTate inamaqoqo kazwelonke wobuciko besimanje baseBrithani nakwamanye amazwe; baphinde babambe noMklomelo weTurner Pride onempikiswano.
Indawo iGreater London eyakhelwe phezulu yindawo enkulu kunazo zonke yasemadolobheni eNgilandi nelinye lamadolobha matasa kunazo zonke emhlabeni. Ezinye izindawo zasemadolobheni ngobukhulu obukhulu nethonya zivame ukuba se-English Midlands.
Ngenkathi amadolobha amaningi eNgilandi makhulu impela, afana Birmingham, I-Sheffield, Manchester, Liverpool, Leeds, Newcastle, Bradford, Nottingham, usayizi wabantu akuyona imfuneko yesimo sedolobha. Ngokwesiko lesi simo sanikezwa emadolobheni anamasonto e-diocesan, ngakho-ke kunamadolobha amancane afana
Wells, Ely, Ripon, futhi Truro.
I-England inezimpawu eziningi ezivelele nezindawo ezizithandayo.
Udonga lukaHadrian - amaRoma alwakha lolu donga lwamamayela ama-87 ukuvikela umgadli wawo wesiNgisi kubahlaseli basenyakatho.
Iziqhingi zaseScilly - iziqhingi zemilingo zeziqhingi ezincane ezisogwini oluseningizimu nentshonalanga yeCornwall.
I-Lake District National Park - izintaba ezinhle, amachibi kanye namahlathi; izwe laseSkyworth.
I-New Forest National Park - ungenye yezindawo ezimbalwa izinsalela ze-oki enkulu ne-Hornbeam Woodland eke yamboza iningizimu yeNgilandi.
INorth York Moors National Park - enamagquma we-heather-clad, amahlathi, iziqhingi zasolwandle ezihlaba umxhwele kanye namabhishi aseceleni, le ndawo ingelinye lamagugu angamaqiniso esiNgisi.
IPeak District National Park - izindawo ezinamagquma nezintaba ezakha umgogodla osenyakatho yeNgilandi.
ISouth Downs National Park - umugqa ophansi onqenqemeni ongaseningizimu yeNgilandi.
Stonehenge - isikhumbuzo se-Neolithic ne-Bronze Age; okungaqondakali njengoba kudumile.
I-Yorkshire Dales National Park - amadolobhana amahle emidwebo yezithombe abekwa kwezinye zezindawo ezinhle kakhulu eBrithani.
Amathonya enkathi ephakathi yaseNgilandi, aqala phakathi kwe-1040 ne-1540, ayiqoqo lezakhiwo ezingamashumi amabili nesithupha ezakha isici esikhulu sefa lobuciko bezwe futhi ziphakathi kwezimpawu ezibonakalayo zobuKristu. Noma bahlukene ngesitayela, bahlanganiswa ngumsebenzi ojwayelekile. Njengamathegi, ngalinye lalezi zakhiwo lisebenza njengebandla eliphakathi lesifunda sokulawula futhi lihlala nesihlalo sobukhosi sombhishobhi. Isonto ngalinye futhi lisebenza njengesikhungo sesifunda futhi kugxilwe ekuziqhenyeni nasothandweni lwesifunda.
ISonto LaseCanterbury eCanterbury, eKent, lingenye yezakhiwo zamaKristu ezindala nezaziwa kakhulu eNgilandi. Iyingxenye yeSiza Samagugu Omhlaba. Yisonto lesonto lombhishobhi omkhulu waseCanterbury, umholi weSonto laseNgilandi kanye nomholi ongokomfanekiso weNhlangano Yomhlaba Anglican. Isihloko sayo esisemthethweni iCathedral neMetro Church of Christ eCanterbury.
Isungulwe e-597, ikhatholika ngokwakhiwa kabusha ngokuphelele phakathi kwe-1070 ne-1077. Ukuphela kwempumalanga kwandiswe kakhulu ekuqaleni kwekhulu le-12th, futhi yakhiwa kabusha kakhulu ngesitayela se-Gothic kulandela umlilo e-1174, nokwenezelwa okukhulu kwempumalanga ukuze kutholakale ukugeleza kwabahambi abavakashela indawo kaThomas Becket, umbhishobhi omkhulu owabulawa e isonto elikhulukazi e1170. AmaNorman nave namanqina asekhona kuze kube sekupheleni kwekhulu le-14th, lapho edilizwa ukuze enze izakhiwo zamanje.
Ngaphambi kweNguquko yesiNgisi ikhatholika yayiyingxenye yeBenedictine
Umphakathi waseMonastiki owaziwa ngeChrist Church, Canterbury, futhi futhi uyisihlalo sombhishobhi omkhulu.
IWestminster Abbey, ebibizwa ngegama lesonto lamaCollegiate e-Saint Peter eWestminster, iyisonto elikhulu, ikakhulukazi lama-Gothic abbey eDolobheni laseWestminster, eLondon, eNgilandi, ngasentshonalanga kweSigodlo saseWestminster. Ingenye yezakhiwo zenkolo eziphawuleka kakhulu e-United Kingdom kanye nendawo yendabuko yokugcotshwa kwamatshe nendawo yokungcwaba amaNgisi futhi, kamuva, amakhosi aseBrithani. Isakhiwo uqobo lwaso kwakuyisonto le-monised laseBenedictine saze sachithwa ku-1539. Phakathi kwe-1540 ne-1556, i-abbey yayinesimo sesonto lesonto lesonto. Kusukela i-1560, lesi sakhiwo asiseyona i-abbey noma isonto lesonto, esikhundleni salo sinesikhundla seSonto LaseNgilandi "I-Royal Peculiar" - isonto elibhekele ngqo enkosini.
Selokhu kwagcotshwa kwabulawa uWilliam umnqobi e1066, konke ukubekwa kwamakhosi esiNgisi nawaseBrithani kuye kwaba seWestminster Abbey. Kube nemishado yasebukhosini ye16 e-abbey kusukela nge-1100. Njengesindawo sokungcwaba abantu abangaphezu kwe-3,300, imvamisa yokuvelela kakhulu emlandweni waseBrithani (kubandakanya okungenani amakhosi ayishumi nesithupha, ONdunankulu abayisishiyagalombili, abefundisi bezinkondlo, abadlali, ososayensi, nabaholi bezempi, neQhawe elingaziwa), iWestminster Abbey kwesinye isikhathi ichazwa njenge-'Valhalla yaseBrithani ', ngemuva kwehholo lokungcwaba eliyi-Norse mythology.
I-England isetshenziswa kahle umoya wasekhaya, umhlaba kanye nemizila yolwandle.
Kukhona amafemu amatekisi yonke indawo (amaningi abhukwa kuphela), futhi wonke amadolobha aba nezinsizakalo zebhasi. 'AmaBlack Cabs' nawo ajwayelekile emadolobheni futhi angadunyiswa kusuka ohlangothini lomgwaqo. Kwesinye isikhathi ezikhungweni zedolobha, imvamisa nje lapho kuvaliwe amakilabhu ebusuku, kuzoba nomugqa wamatekisi kwesinye isikhathi ozobhekwa ngemashi noma ngamaphoyisa.
Ukuze uphephe, qiniseka ukuthi uthatha itekisi elibhalisiwe noma iklabishi elimnyama; naphezu kokusebenza kukahulumeni, baningi abashayeli bamatekisi abazimele abangabhalisiwe abakhona - laba banedumela lokungaphephile, ikakhulukazi uma ungowesifazane.
I-England inesinye sezindawo eziphakeme kakhulu zemizila kaloliwe emayela lesikwele emhlabeni. Kunokuthuthuka okuningi nokutshalwa kwemali eminyakeni yamuva kunethiwekhi yesitimela nokuhambahamba kwezitoko kepha ukubambezeleka kanye nokukhanselwa kwenzeka ngezikhathi ezithile. Ukugumbuqela kungaba yinkinga emadolobheni amakhulu, ikakhulukazi 'ngehora lejubane' (i-7AM - 9AM & 5PM - 7PM, ngoMsombuluko kuze kube uLwesihlanu) ngakho-ke kungcono ukugwema lezi zikhathi lapho amathikithi ebiza futhi.
Amabhasi amaningi, avamile futhi athembekile emadolobheni amakhulu amaningi nakwindlela enhle yokuhamba. Izindawo zasemakhaya azisebenzi kahle futhi ukuqasha imoto imvamisa kuyindlela enhle yokuhlola emaphandleni kanye nasemizaneni.
Imigwaqo inakekelwa kahle kakhulu kufanele kuthathwe imigwaqo yasemakhaya nemincane, eminye yayo imincane kakhulu, isontekile futhi imakwe kabi, kuyilapho imigwaqo eminingi iyindlela eyodwa futhi ibanzi nje ngokwanele imoto eyodwa, okusho ukuthi umhlangano awunakuba mnandi. Izimpawu nokumakwa kwemigwaqo eminingi kucacile, yize ukuzungeza kwemigwaqo kwenza ukuhamba kwethrafikhi kuthambe kancane ngesikhathi se “Rush Hour”. Inkinga enkulu yokushayela eNgilandi umthamo omkhulu wezithuthi emigwaqweni. Ngeshwa lokhu akugcini lapho ngokugijimela amahora amancanyana kanye namadolobha amakhulu, futhi nezimoto eziwela izwe zidonsa kancane lapho zimiswa njengoba zidlula ezindaweni zasemadolobheni. Lungiselela izikhathi zokuhamba zinde kakhulu kunokuba ubuzozilindela ngokujwayelekile maqondana nemayela. Umkhawulo wejubane, ngaphandle uma kuchazwe ngenye indlela, yi-30 noma i-40 mph ezindaweni ezakhiwe, i-95 km / h kwenye indawo ne-110 km / h emigwaqweni ehamba ngemigwaqo neminye imigwaqo elawulwa ukungena. Amakhamera wejubane namaphoyisa omgwaqo amaningi amaningi ngakho-ke kucwayiswa.
ILondon yisiqalo nesiqalo sabavakashi abaningi bamazwe omhlaba. Inikeza iminyuziyamu engenakubalwa nokuhenda ngomlando. Ukuze uhlangabezane neNgilandi yangempela, kodwa-ke, kufanele uphume ngaphandle kokuphokophela kwenhlokodolobha ubone ukuthi yonke iNgilandi izonikela ini. Uzothola lonke iNgilandi lihluke kakhulu enhlokodolobha yalo; impela, uma uhambela eLondon kuphela, awukaboni 'iNgilandi' - ubone idolobha elilodwa elinezimpawu ezifanayo nezwe lonke.
Uma sifushane ngesikhathi, ungakuthola kulula kakhulu ukuzinza edolobheni lesifunda futhi uthathe uhambo losuku oluya eNational Parks, ogwini nasemadolobheni amancane. Uma unesikhathi esiningi, khona-ke ungazibeka ku-B&B (Bed and Breakfast) kunoma yikuphi okungenhla. Uzothola ukuthi izithuthi zomphakathi eziya emadolobheni amakhulu nasemadolobheni amakhulu ziyamukeleka, kodwa ukuthi ezindaweni ezincane ezingekho lapho kuthathwa khona ithrekhi kufanele ucwaninge uhambo lwakho ngokucophelela, noma ucabangele ukuqasha imoto.
Izindawo ezidumile ongavakashela zihlanganisa izifunda zase-Yorkshire eMpumalanga, kanye neCornwall eningizimu Ntshonalanga yeNgilandi, ama-National Parks abhalwe ngaphezulu, kanye namadolobha anomlando njenge-York, Bath neLincoln.
ILiverpool, nokuba yindawo edumile yokuphumula yedolobha ngokwayo namagugu ayo aseBeatles nokuheha izinto zasolwandle, ikhethekile ekuhambeni kosuku ukuya eLwandle District, eNyakatho Wales naseYorkshire.
I-Plymouth yenza isisekelo esihle sokuhlola i-Dartmoor, ngenkathi ivumela uhambo lwosuku oluya eCornwall futhi inikeze uhlu lwayo oluhehayo neminyuziyamu.
IBristol, idolobha elikhulu kunawo wonke eWest Country lenza ikhefu elijabulisa kakhulu ngempelasonto. Yize kuze kube muva nje kunganakwa amanye amadolobha aseSouthern English anjenge-Oxford, iCambridge, iBath neBrighton, iBristol isifikile ngokubonga kwayo ngesimo sayo sobunxele, yabeka isitolo esidala, indawo ethengisa izinto ezinkulu kunazo zonke iWest Country, futhi ngaphezu kwakho konke ukuyakha okuhle kakhulu nomculo ogqamile. Yize iBristol ingenazo izinto ezithile (ngaphandle kweClifton Suspension Bridge), iyidolobha nje elingaphequlula lapho uzilibazisa khona bese uthambisa inyamazane, ivibe elihle leDolobha laseBrithani elivuseleleke kakhulu futhi labeka emuva.
Uma unesikhashana, ungakwazi ukuchitha isonto lonke endaweni yakini, ngokwesibonelo ukuhlala e-Ambleside esifundeni iLake District.
Uma ufuna amabhishi anesihlabathi esimhlophe, ulwandle oluluhlaza okwesibhakabhaka, umkhathi wase-Arthurian kanye nogu lolwandle oluhlaza okotshani olungama-Celtic oluya ogwini lwase West Country eDevon naseCornwall - ikakhulukazi, amabhishi amahle kakhulu aqhuma emabhishi eNorth Devon's Bideford Bay naseKing Arthur indawo azalelwa kuyo eNorth Cornwall's Ugu lolwandle lwase-Atlantic (i-Bude, Tintagel, Padstow, Polzeath njll).
I-England inezitsha zendabuko ezidume umhlaba wonke kusuka Beef Wellington futhi I-Steak nephayi yezinso kwabathobekileyo sandwich. Kodwa-ke, isidlo sanamuhla sesiNgisi kungenzeka ukuthi kube yiLasagne noma iChicken Tikka Masala, ngokudla kwendabuko kwamaNtaliyane nawamaNdiya kuthatha ukunambitheka kwesiNgisi. AmaNgisi amukela ukudla okwenziwa ngamanye amazwe.
Kunezindawo eziningi ezisezingeni eliphansi nezindawo zokudlela ezisezingeni eliphansi, futhi izinsizakalo zemoto kaningi zingaqhubeka zikhiqize ukudla okungafinyeleleki kahle, kepha-ke, ungalindela njalo ukuthi izinkampani zokudlela kanye nezindawo zokudlela zinikeze ukudla okuthokozisayo nokwethulwe kahle.
“Ukudla ngaphandle” kuyindlela ejwayelekile yokugubha umcimbi okhethekile womndeni, futhi abantu balindele ukuthi isidlo siphilele lowo mcimbi. Izinhlelo zokupheka manje seziphakathi kokuthandwa kakhulu kuthelevishini, izitolo ezinkulu ziguqule ukudla okuningi okungaziwa ukuthi kube yizinto zansuku zonke, futhi ama-Shops amaFama namaMakethe amaFama bamangaze bonke abaphawula ngokuba yizindawo ezithandwayo ngempelasonto “zokuzilibazisa” lapho abantu bengathenga khona isiNgisi esihle inyama, izithelo, nemifino.
Izinhlanzi nezikhumba-Izinhlanzi ezijulile, ezithosiwe (ezivame kakhulu zikanodoli noma i-haddock) ezinama-chip, eziphuma kakhulu kwezinhlanzi zochwepheshe ne-chip. Kutholakala kulo lonke elase-UK.
Amaphayi- I-Pie iyingxenye esemqoka yokupheka ngesiNgisi. Iza ngokugcwaliswa okuningi okuhlukahlukene, i-Steak & Kidney, Inkukhu & Ham, ngokuba izinketho ezimbili ezidumile zabaningi. Ingafakwa ngokhokho eyenziwe ngePuff noma ngeFry crust khekhe bese kudliwe okuShushu noma okubandayo.
Isidlo sakusihlwa(eyaziwa nangokuthi “i-Sonto eyosiwe” ngenxa yosuku evame ukusetshenziswa ngalo) iyatholakala phakathi nesikhathi sokudla kwasemini kanye nasekuseni kusihlwa cishe kunoma yikuphi ukushicilelwa kwesiNgisi okudla ukudla. Izinga lizohluka kakhulu ngokuya ngokuthi ukudla sekuphekwe kanjani okusha.
I-Yorkshire pudding- i-pudding eshisayo eshaywe ne-eyosiwe (imvamisa yenkomo); kwasekuqaleni kwakusetshenziswa esikhundleni sepuleti kudliwe nokudla. Uhlobo lwe-Giant luvame ukuvela kumamenyu e-pub njengento eyinhloko yokudlela, ngokugcwalisa “ngokugcwalisa” (IGiant Yorkshire Pudding egcwele inyama yenkomo).
Qoqa eHole- amasoseji e-Yorkshire batter pudding
I-Steak nephayi yezinso- isudu yokududla eyenziwe ngenyama yenkomo nezinso
ILancashire Hotpot- imifino enempilo nenhliziyo ephuma eLancashire
Cornish Pasty(nezinye izinhlobo zephayi yenyama ezweni lonke) - inyama yenkomo nemifino ecaleni lekhekhe
Ibhulakufesi lesiNgisi eliphelele- (Okuvame ukufushaniswa: ungathuki uma iseva yakho etafuleni lesidlo sasekuseni ikubuza ukuthi "Ngabe ufuna isiNgisi esigcwele?") "Ngokugcwele", ingahle ibe nobhekeni othosiwe, amaqanda othosiwe, amasoseji othosiwe, isinkwa othosiwe , othosiwe othosiwe omnyama (isoseji yegazi), amakhowe, amaqanda aqhekeziwe, ubhontshisi obhakwe kusoso we-utamatisi, kanye no-toast nebhotela - “kugezwe” ngenani elikhulu letiye elinamandla noma ikhofi ngobisi. I-American American version manje iyavela, enama-hash brown esikhundleni sesinkwa othosiwe. Wakhonza ezinhlotsheni ezingakhanyisiwe kancane ezindaweni zokumisa abashayeli bamaloli, nezinguqulo ezilandelwayo emahhotela (lapho kuzovame ukuba khona ibhaffet yalezi zinto ukuze “uzisize” usuka). Kwesinye isikhathi kuthiwa lesi sidlo siseyizinganekwane kuphela ezivakashini, ngoba amaNgisi manje asematasa kakhulu ngebhulakufesi. Ngokuvamile, amaNgisi abona i-'fry-up '(njengoba yaziwa) njengokudla okufanelekile ongakusebenzisa lapho usenkingeni ngemuva kobusuku bokuphuza noma ukwelashwa okwenziwa ngempelasonto. Noma iyiphi ikhefi elingabizi (lohlobo olunamathelisa amanani entengo ye-Day-Global efasiteleni, negama lakhe elishiwo ukuthi "kakhokho" enyakatho yeNgilandi) lizoba “nokudla kwasekuseni kosuku lonke” kwimenyu. I-English Full Breakfast ivame ukulingiswa ezifundeni ezingomakhelwane ze Scotland, I-Wales ne-Ireland.
Isidlo sasemini sikaPloughman- Okujwayelekile eNtshonalanga yeNgilandi. Isidlo sasemini esibandayo esiqukethe ushizi, i-chutney nesinkwa. Izithako ezingeziwe zifaka i-ham, ama-aphula kanye namaqanda.
Ama-Pubs ayindawo enhle yokuthola ukudla okwenziwe ngamanani entengo efanele, yize iningi liyeka ukuhlinzeka ngokudla lapho lizungeze i-9-9: 30PM. Abanye bangase bayeke ukuphakela ukudla phakathi kwasemini nesidlo sasebusuku. Ukudla oku-Pub sekuyinto eyinkimbinkimbi kakhulu eminyakeni yamuva nje kanye nokusebenzela imali yendabuko yesiNgisi ethokomele, izitsha zokudla ezingaphezulu manje sezilungiswa ngobuningi bama-pubs amakhulu nochwepheshe be- “gastro Pubs”.
Ukudla kwamaNgisi kusanda kwenziwa inguquko enamadolobha amaningi amakhulu enezindawo zokudlela eziwina umklomelo eziqhutshwa ngabapheki abaningi be-TV 'abadumile' abasephenduke ingxenye yokudla kwesiNgisi ngokudla. Ukudla endaweni yokudlela esezingeni eliphakeme kungaba yinto ebizayo. Ukudla okuhle okunamakhosi amathathu endaweni yokudlela ehlonishwayo kuvame ukubiza cishe nge- £ 30- £ 40 ngekhanda ngalinye kufaka newayini.
Uma ukudla okuhle futhi okushibhile okungabizi kakhulu kungukukhetha kwakho, zama enye yezindawo zokudlela eziningi zezizwe ezinjengeShayina, i-Eshiya noma iMexico. Ukudla i-curry noma i-balti endaweni yokudlela yaseNdiya kufana nokuya esiNgisini. Lezi zindawo zokudlela zitholakala yonke indawo - ngisho nemizana emikhulu inazo - futhi imvamisa ukudla kusezingeni elifanele futhi bazonakekela okuthandwa kakhulu. I-curry enhle enezitsha eziseceleni ingahle ibe nayo cishe nge- $ 10-15 ekhanda, kanti amanye ngaphandle kwamalayisense otshwala akuvumela ukuthi ulethe nezakho uphuzo oludakayo. Ukudla i-curry out kuyindlela yomphakathi futhi kaningi uzothola amadoda azama uku baphonsela inselelo izinhlamvu zabo zokunambitha ku-duel, bakhetha ama-curices ama-spicier kunokuba bethola ukhululekile. Emadolobheni nasemadolobheni lezi zindawo zokudlela zivame ukuvulwa sekwephuzile (ikakhulukazi ngoLwesihlanu nangoMgqibelo ebusuku) ukubhekela abantu ukudla uma sekuvalwa. Kungalesi sikhathi lapho bengathola khona umatasa kakhulu futhi bephilile, ngakho-ke uma ufuna ukugwema izixuku ke vakashela izindawo zokudlela ngaphambi kokuvalwa kwendawo.
Ngokungafani namanye amazwe amaningi aseYurophu, ukudla okwenziwe ngemifino (futhi ngokwezinga elincane, i-vegan) kutholakala kabanzi futhi kuyaziswa kuma-pubs nezindawo zokudlela ezinezitsha ezimbalwa ezivame ukuvela kumenyu eceleni kwezindlela ezijwayelekile zenyama nezinhlanzi. Kodwa-ke, abantu abadla imifino basengathola izitsha ezahlukahlukene esikhundleni salokho - ikakhulukazi kuma-pubs, lapho izitsha ezithile ezinjenge- “veggie” lasagna noma i-mushroom stroganoff zifaka njalo njalo.
I-Tipping kulindeleke njalo ezindaweni zokudlela ngaphandle kokuthi kungezwe imali ekhokhiswayo kwinkokhelo, ngethiphu ye-10% ethathwa njengokujwayelekile. Ukunikeza izeluleko emigoqweni nasezindaweni zekhefi kuvamile.
Indawo yendabuko yokuphuza "i-pub" (emfishane "yindlu yomphakathi"). Lokhu kuvame ukuqanjwa ngezimpawu noma izehlakalo zasendaweni, futhi iningi lizoba nesibonakaliso se-heraldic (noma i-pseudo-heraldic) esibonakaliso ngaphandle; izikhungo zakamuva zingahlekisa ngaleli siko (isib. INhloko Yendlovukazi) enomfanekiso kaFreddie Mercury, umhlabeleli ophambili we-rock band Queen). I-England ibukeka inenombolo emangazayo yama-Pubs. Ngenkathi usedolobheni uvame ukungabi ngaphezu kokuhamba ngamaminithi we-5 kusuka kunoma iyiphi i-pub.
I-pub iyisikhungo sesiNgisi, noma sinciphile. Imikhuba iyashintsha, ukubhema kuvinjelwe ngaphakathi kuma-pubs, ubhiya uhlala ushibhile ezitolo ezinkulu, ophuzweni oludakayo awupheleli, futhi abanini bezindawo abahlala endlini bavame ukudonswa ngemikhuba ebukhali yizinkampani ezinkulu ezinikezela ngababhiya, futhi ezibuye zibe nezakhiwo eziningi zama-pub.
Kunezinhlobo eziningi ezahlukene ze-pub. Abanye 'bendabuko' yendabuko, futhi ingxenye yangempela yomphakathi. Kuma-Pubs amaningi omakhelwane uzothola zonke izizukulwane zihlangana ndawonye, ​​okuvame ukunika abashisekeli umuzwa womphakathi. Bekungeke kube yinto engjwayelekile ukubona izizukulwane ezintathu zomndeni owodwa zihlangana endaweni yomakhelwane. Noma kunjalo, ama-Pubs angahlukahluka ebangeni. Ngokuya ngendawo, ungathola ukwamukelwa okufudumele nokunobungane, noma nentsha edakiwe echitha umlo.
Kodwa-ke, ama-Pubs amaningi avela endaweni ethile enempilo. Manje kunama-Pubs amaningi azigqajayo ngokusebenzela 'ama-ales wangempela' - ubhiya oqhutshwa ngesilinganiso esincanyana kunezindlela zokupheka zesiNgisi nezindlela zokupheka. Noma yimuphi othanda ubhiya ovakashelayo kufanele azilandele lezi phansi. Ama-pubs amaningi, emaphandleni nasemadolobheni, athuthele ekutholeni ukudla okuhle. Futhi ngenkathi ama-Pubs amaningi ezokwenza ukudla, kulawa 'ama-gastro pubs' lapho uzothola khona ukudla okulungiselelwe kahle, ngokuvamile okuyingxube yezitsha zesiNdabuko namathonya aphesheya. Amanani azothambelana.
AmaNgisi ajwayelekile ngabantu abanenhlonipho, futhi njengezinye izindawo eziningi kuthathwa njengokubi ukungasho ukuthi “ngicela”, “ngiyabonga”, “bajabule” noma “ngiyaxolisa”. Ukuvuma ikhanda noma ukumamatheka nakho kuyimpendulo. AmaNgisi ayaxolisa kakhulu, kungaba iphutha labo noma cha. Kufanele wenze okufanayo nasezintweni ezincane. Kwesinye isikhathi, abantu ongabazi nabangane bakhulumisana ngokwethukela “ngabalingani” ngokwethukela, kepha lokhu akumele kusetshenziselwe abantu abanesikhundla esiphakeme kunawe.
Gcina konke lokhu engqondweni lapho uhlola i-England.
I-Durham castle ne-Cathedral
ISonehenge, i-Avebury namaSayithi aHlanganisiwe
I-Studley Royal Park kufaka phakathi amaRuins of Fountount Abbey
Izinhlaka zoMbuso WaseRoma
Isigodlo saseWestminster kanye neWestminster Abbey kufaka iSonto likaSanta Margaret
ISonto LaseCanterbury, iSt Augustine's Abbey, neSonto likaSt Martin
Inhliziyo ye-Neolithic Orkney
I-Derwent Valley Mills
Izingadi ZaseRoyal Botanic, Kew
Isifunda sesiNgisi iLake Lake
IJodrell Bank Observatory